(भक्तबहादुर श्रेष्ठ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका एकजना महत्वपूर्ण हस्ति हुनुहुन्छ । वि.सं १९९० मा मकवानपुर जिल्लामा जन्मिनु भएको भक्तबहादुर श्रेष्ठको निधन २०६८ साल पुस २७ मा भएको थियो ।
२०११ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिनुभएको श्रेष्ठ निरन्तररूपमा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सक्रिय हुनुभयो । क्रान्तिकारी विचारका पक्षमा निरन्तर वैचारिक सङ्घर्ष चलाउँदै जाने क्रममा वहाँ २०३१ सालमा गठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (चौथो महाधिवेशन) को केन्द्रीय नेता हुनुभयो । वहाँ २०३८ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (चौथो महाधिवेशन) को महामन्त्री बन्नुभयो ।
कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखापरेका विभिन्न किसिमका विचलनका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै अघि बढ्ने क्रममा निर्माण भएको नेकपा (माओवादी) को वहाँ एकजना कुशल नेता हुनुहुन्थ्यो । निधन हुँदाको समयमा उहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) को केन्द्रीय सल्लाहकार समितिको महासचिब हुनुहुन्थ्यो । पंचायती काल र बहुदलीय कालमा समेत गरी ७ वर्ष जेल र हिरासत भोग्नु भएको श्रेष्ठले दर्शन, अर्थशास्त्र र राजनीतिका क्षेत्रमा कलम चलाउनु भएको छ । इतिहास र साहित्यिकलामा समेत विशेष रुचि राख्नुहुने भक्तबहादुर श्रेष्ठको योगदान नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सदैव स्मरणीय रहने छ ।
उहाँको सातौँ स्मृति दिवसका सन्दर्भमा उहाँप्रति क्रान्तिकारी श्रद्धान्जली अर्पण गर्दै उहाँको आत्मजिवनी 'मेरा जीवनका उकाली ओरालीहरू' बाट एउटा अंश प्रस्तुत गर्दैछौं ।)
जेल जीवनको नयाँ अनुभव
वीरगञ्ज जेल केन्द्रीय जेल हो । यहाँ साथै जोडिएको एउटा महिला जेल थियो । पछि त्यो जेललाई प्रायः गरेर राजबन्दीहरू राख्ने जेलमा परिणत गरियो । त्यो जेलमा चार, साढे चार महिना बितायौँ । त्यहाँ राजबन्दीका नाममा पहिले हामी २ जना गोविन्द दाइ र म मात्र थियौँ, पछि हटियाबाटै गोपालध्वज जोशी मेरो जेठानलाई पनि ल्याइयो । हामीलाई जेल सार्ने समयभन्दा दश दिन अगाडि, हेटौँडाको हु.प्र. कान्डमा नरबहादुर राई र मोहन गुरुज्यू पनि आइपुग्नुभयो । हामीलाई काठमाडौँ जेल चलान गरेपछि हटियाबाटै राधेश्याम, बद्रीप्रसाद खतिवडालाई पनि त्यहाँ ल्याएका रहेछन् । हटियाबाट पहिलापहिला मानिसहरू जेल पर्ने गरेका थिएनन् । त्यसपछि जेल पर्नेको लर्को नै लाग्यो र हटिया सरकारको आँखा गढेको लाल एरियामा पर्नगयो । समाज पनि ध्रुवीकृत भयो । हाम्रो पक्ष र विरोधीको पक्ष । विरोधी पक्ष भनेको निरङ्कुश व्यवस्थाका दलालहरू र हाम्रो पक्ष भनेको कम्युनिस्ट पक्षहरू ।
वीरगन्ज जेलमा बेलुकी ५ बजेपछि प्रत्येक नम्बरको गेट बन्दहुन्थ्यो । भित्रै दिसापिसाब गर्नुपथ्र्यो । त्यसले गर्दा दुर्गन्धमय वातावरण हुन्थ्यो । बिहान ६÷७ बजेपछि मात्र गेट खुल्थ्यो । हामीहरू पहिले हेलमेल नहुन्जेल अलि कस्तोकस्तो लागेको थियो । हेलमेल बढदै गएपछि निकै रमाइलो वातावरण बन्दैगयो । राजबन्दी भनेर हामी बसेका नम्बरका कैदीहरूले सम्मान निकै गर्थे । हाम्रा कुराहरू ध्यान दिएर सुन्थे । जेलरसँग मिलेर ठेकेदारले ढुङ्गामाटो मिसिएको चामल दिन्थ्यो । त्यो पनि दिनहुँ नदिएर हप्ता–पन्ध्र दिनपछि दिनेगथ्र्याे । पहिले दिएको रासनले नपुगी ऋण लिएर रासन आएपछि तिर्नेगरी ऋण लिएर काम चलाउँथ्यौँ । ऋण हप्ताको सयकडा २५ले ब्याज लिन्थे । त्यस्तो काम नाइकेहरूबाट हुन्थ्यो । दिनको ७५० ग्राम चामल र ५० पैसा दिन्थे । त्यसले गुजारा चलाउन धौधौ पथ्र्यो । जेलको दोकानबाट पनि त्यत्तिकै शोषण हुन्थ्यो । महँगी बजारभन्दा सबाइ बढी, माना ढकमा त्यत्तिकै कमी । यी सबै विषयहरूलाई लिएर हामीले सङ्घर्ष गर्ने योजना बनायौँ । निजगढ आबादीका विषयलाई लिएर थुनामा परेका औतारसिंह लामा निकै झक्की स्वभावका थिए, उनलाई अनशन बस्नसमेत तयार पा¥यौँ ।
एउटै लामालामा कोठामा लहरै कोचाकोच गरेर सुत्नपर्ने । उडुस, उपियाँ जुम्राहरूले आतङ्कित नै पार्ने । बिहान घाम लागेपछि त कपडामा जुम्रा मार्नुपर्ने एउटा मुख्य कामै हुन्थ्यो । एउटै कोठामा बन्दीहरूको आफु सुतेको २ हात पर खाना बनाउने चुलाहरू हुन्थे । खाना बनाउँदा ती चुलाहरूबाट निस्केको धुवाँले कोठा जम्मै ढाकेर बस्नै नसक्ने समेत हुन्थ्यो । पुस्तकालय पत्रपत्रिकाहरू ठयाम्मै थिएनन् । यी सबै कुराहरूलाई लिएर सुविधा प्राप्तिको लागि सङ्घर्ष गर्न कैदीहरू एकगठ भए । भजन गाउन गोविन्द दाइ सिपालु । बेलुकी हाम्रा आफ्नै नम्बरमा राजनीतिक भजन जोडतोडले चल्थ्यो । त्यसैले हामीलाई तपाईंहरूजस्तो राजनीतिक बन्दी कैदीहरूसँग बस्नहुन्न भनी नाइकेहरूसँग बस्न फकाउन थाले । हामीले यसलाई इन्कार ग¥यौँ । भित्रै हामीलाई रमाइलो थियो । प्रत्येक बन्दीहरूको गाथाहरू हामीलाई कथाजस्तो लाग्थ्यो । हामी जनचेतना बढाउने कुराहरू गर्न पाउँथ्यौं । डाँकाहरू भन्थे—“कम्युनिस्टहरू र हामी त झन्डै उस्तै त हौँ नि, किनभने हामी पनि धनीको लुटेर गरीबलाई बाँड्छौँ, कम्युनिस्टहरू पनि त्यसै त गर्छन् ।” उनीहरूलाई दर्शन, सिद्धान्त, विचारधारा र राजनीति के थाहा । त्यसो होइन भनेर हामी उनीहरूलाई सम्झाउने कोसिस गथ्र्यौं ।
जेलभित्रका सबै एकगठ भएर जेलसुधारका लागि त्यहाँ भएका अन्याय–अत्याचारका विरुद्ध लड्ने निधो भएअनुसार एकदिन बिहानदेखि जेलको मूल ढोकामा जम्मा भएर नारा लगाउन थाल्यौँ । धेरैजस्ता बन्दीहरू जेलघरको छतछतमा बसेर नाराहरू लगाउनथाले । ढोकाभित्र कसैलाई पस्न मनाही गरियो । त्यो नारा वीरगन्ज बजारभरि फैलिएछ । हतियारबन्द प्रहरीहरूले जेलको चारैतर्फ घेरा दिएर बसे । बाहिरबाट लाउड स्पिकरद्वारा जेलका तर्फबाट चेतावनी आउनथाल्यो । साथै आश्वासन पनि । त्यस्तै एक दुई दिन नाराबाजी चलिरह्यो । हाम्रा मागहरूका बारे विचार गर्न वार्ताको प्रस्ताव आयो । वार्ता गर्ने कुरामा सहमति पनि भयो । भोलिपल्ट बिहानै ओछयानबाट नउठदै मलाई र गोविन्द दाइलाई बाहिर बोलाहट भयो र हामी हत्तपत्त बाहिर निस्क्यौँ । तर हामीलाई त काठमाडौँ जेल चलान गर्न पो बोलाएका रहेछन् । हामीलाई भित्र पस्न दिइएन र पाँच छ जना हतियारधारी पुलिसका साथ बसद्वारा हामीलाई काठमाडौँ चलान गरियो र काठमाडाँै सेन्ट्रल जेलको अफिसमा पुगेपछि मलाई सेन्ट्रल जेलमा र गोविन्द दाइलाई सँगै जोडिएको भद्रगोल जेलमा, फुटाएर राखियो ।
यहाँ गएको दिनदेखि आफ्नो सिदा, रासन उसैलाई दिनेगरी उसको भान्छामा खान थालेँ । निर्मल लामाजी पनि यही जेलमा छन् भन्ने कुरा बुझेँ । तेस्रो दिन घाम तापिरहेका निर्मलजीलाई देखेँ र नजिकै गएर परिचय दिएँ । उहाँले खुसी भएर हात मिलाउनुभयो र भन्नुभयो—“पुष्पलालजीले तपाईँको नाम लिइरहनु हुन्थ्यो । इमान्दार हुनु हुन्छ, उहाँसँग सम्पर्क राख्नुस् । म त तपाईं त यामानको जीउ भएको जुँगामुठे हुनुहोला भनी ठानेको थिएँ ।”। उहाँ निकै फरासिलो र मिलनसार लाग्यो । उहाँलाई भेटेपछि मेरो न्यास्रोपन हट्यो । उहाँको कोठा हेर्न गएँ । भित्तामा कम्युनिस्ट पार्टीको रातो हँसिया–हथौडा भएको झन्डा टाँगिएको रहेछ । मार्क्स , एङ्गेल्स, लेनिन, स्टालिन र माओका भोल्युमहरू सजाएर राखिएको । जेलभित्र राम्रै सबैले मान्ने र उहाँसँग केही हच्किने पनि अनुभूति भयो । मलाई पनि अब सजिलैसित जेलजीवन गुजार्न सकिन्छ भन्ने उत्सुकता जाग्यो । उहाँकै मेसमा केही दिनपछि आएर मिसिने कुरा भयो । उता भद्रगोल जेलमा गोविन्द दाइ एक्लै भएकोले साह्रै निरासिनु भएको रहेछ । त्यहाँको चौकीदार (जेलभित्रको कैदीहरूको हेड) मकवानपुर जिल्लाकै भीमफेदी नजिक उहाँको ससुराली टोलको रहेछ । कुराकानीमा जानपहिचान भएछ । मलाई सेन्ट्रलबाट भद्रगोलपट्टि ल्याउन जोर लगाउनु भएछ र जेलरसँग कुरा मिलाई म पनि सेन्ट्रलबाट भद्रगोल जेलतिर आएँ ।
सेन्ट्रल जेलमा कमरेड मनमोहन अधिकारी, कमरेड शम्भुराम श्रेष्ठ, विद्यार्थी आन्दोलनमा परेका महेश्वरमान श्रेष्ठहरू थिए । गोविन्द दाइ र मलाई ३ नं. घरको कोठामा राखियो । त्यसपछि, कमल कोइराला पनि भद्रगोल जेलमा आइपुगे । गोविन्द दाइ र मेरो एउटा भान्छा थियो । मनमोहन, शम्भुराम, महेश्वरमान श्रेष्ठ, कमल कोइराला र स्वास्नी मारेर ज्यान मुद्दामा परेको एउटा पाँडे थरको मान्छेको एउटै भान्सा थियो । गोविन्द दाइलाई धेरै खानुपर्ने भएकोले दिएको सिदाबाट हामीलाई खाना पुग्दैनथ्यो । हामीलाई चौबिसै घण्टा भोक लाग्ने, तर अघाउन नपाउने हुँदा म साह्रै कमजोर हुँदैगएँ । कमल कोइराला र महेश्वरमानले उनीहरूको भान्सामा मिलाउन जोर गरेका थिए, तर भान्छा ठूलो हुँदैन भनेर मनमोहनजीले मान्नुभएन । यसै बेला रूपचन्द्र विष्टजी आइपुग्नुभयो र हाम्रो भान्सामा मिल्नुभयो । रूपचन्द्र आएपछि मेरो कमजोर अवस्था देखेर मलाई फलफूल खुब खुवाउनुभयो । काठमाडौँका उहाँका इष्टमित्रहरू फलफूलहरू लिएर निकै भेट्न आउँथे । लौ तैँले खानुपर्छ भनेर बसेर खुवाउनुहुन्थ्यो । भात खाँदा पनि दामासही लगाउनु भयो । सबैको बराबर सिधा आउने, किन कसैलाई बढता दिने भनेर बराबर बाँडनुहुन्थ्यो । मैले गोविन्द दाइलाई मर्का पर्छ भनेर मेरो भागबाट थपिदिन्थे । तर, उहाँ गाली गर्नुहुन्थ्यो । फेरि भटमासको दूध बनाए खुब खाइयो । राँगाका खुट्टाको सूप बनाएर खाइयो । त्यो खाएको खुट्टाको हाड चुसेर सुख्खा पारिन्थ्यो र फेरि बेस्सरी उमालेर रस पिइन्थ्यो । जब खुट्टाको रसमा तर आउन छोड्थ्यो तब मात्र त्यो हाडले फुर्सत पाउँथ्यो । यो कुरा जेलभरि हल्ला भयो चुसेको हाड फेरि खायो भनेर । त्यसपछि त्यसरी खान छोडियो ।
एकचोटि के भयो भने गोविन्द दाइकी श्रीमती भेट्न आँउदा १० पाथीजति मसिनो चामल ल्याउनुभएको रहेछ । तर, त्यो चामल उहाँले फिर्ता गरिदिनु भएछ । जेलमा मानिसहरूले थाहा पाएर हल्ला नै भयो । जेलमा आएको कुरा फिर्ता गर्दा अचम्म मान्दारहेछन् । त्यो कुरा रूपचन्द्र विष्टलाई पनि थाहा भयो र गोविन्द दाइसँग एकदम रिसाउनुभयो । हामीले पनि खान्छौ भनेर फिर्ता पठाएको भनेर अर्थ लगाए । यो कुरा मनमोहनजी, शम्भुरामजीलाई पनि भन्नुभयो । जसलाई धेरै खानुपर्छ उसले चामल फिर्ता गर्ने ? उसले धेरै खाँदा भक्तबहादुरलाई मर्का परेर त्यसरी दुब्लाएको रहेछ भन्नुभएछ । मनमोहन, शम्भुरामजीले गोविन्द दाइलाई किन चामल फिर्ता गर्नुभएको भनेर गुनासो पोखेछन् । शम्भुरामजीले गोविन्द दाइलाई भेटेर सोध्नुभएछ, तपाईं बाहिर कति खानुहुन्छ भन्दा २ माना चामलको भात खान्छु । घरमा कति खानुहुन्छ नि भन्दा एकमाना भन्नुभएछ । शम्भुरामजी न हो बाहिर अरूको खाँदा २ माना घरमा एक माना तपाईं त अचम्मकै हुनुहुँदोरहेछ । त्यस्तो खाने मान्छेले ल्याएको चामल किन फिर्ता गरेको त भनेछन् । त्यस बेलादेखि गोविन्द दाइलाई आपूmलाई सबैले घृणा गरेको जस्तो महसुस भयो । अनि एकदिन मलाई आएर गुनासो पोख्नुभयो, मसँग मनमोहन, शम्भुरामजीहरू बोल्दा पनि बोल्नुहुन्न भनेर दिक्क मान्नुभयो । तपाईंलाई त्यस्तो लागेको छ, म कुरा गरौँला भनी शान्त्वना दिएँ । त्यो कुरा उनीहरूलाई पनिभनेँ । उहाँलाई त्यस्तो लागेको, त्यस्तो होइन भनेर भन्नुभयो । भेट्यो कि बोलिदिने गरेपछि गोविन्द दाइको पनि चिन्ता हट्यो ।
रूपचन्द्रको स्वभाव पनि अनौठो थियो । मनमोहनजी, शम्भुरामजीलाई भेट हुनासाथ अनेकौँ प्रश्न माथि प्रश्न सोधेर हैरान पार्ने । भेट्यो कि प्रश्न सोधिहाल्ने । शम्भुरामसँग मात्र अलि हच्किने । मनमोहनजीलाई त हैरानै पार्ने । पिसाब फेर्न जाँदाआउँदा पनि जम्काभेट भयो कि च्याप्प समातेर प्रश्नको वर्षा गर्ने । पिसाब फेर्न जानलाग्या भन्दा पनि नछोडने, कुरा सिद्धिएला र जाउँला भन्दाभन्दै प्रश्न नसिद्धिने, अनि बलजफ्ती गरेर गयो, सुन्ने धैर्य छैन भनेर लान्छना लगाउने । मनमोहनजीले यस्तो गुनासो हामीसँग पोख्नुहुन्थ्ये ।
एकचोटि एउटा घटना घट्यो । हामी सुत्ने कोठामा गोविन्द दाइ, म, रूपचन्द्रजी र एउटा नाइके सुत्थ्यौँ । एक दिन कोठामै बसेर म र नुवाकोटका एकजना साथी क्यारेमबोर्ड खेलिरहेका थियौँ । एउटा कुनामा त्यो नाइके र रूपचन्द्रजी पहलमानी कसरत गरिरहनुभएको थियो । नाइकेले घचेटिदिएछ र रूपचन्द्रजी म घोप्टो परेर क्यारेम खेलिरहेको हुँदा मेरो डँडाल्नोमा आएर बज्रिनुभयो । म त अररो भएर खुट्टा तनक्क तन्काएर हल न चल भएँ । के भयो कसो भयो भनेर हेर्नुभन्दा उहाँ त आत्तिएर, सँगै जोडिएको मनमोहनजीको कोठातिर जानुभएछ र बोल्दै नबोली चुपचाप बस्नुभएछ । हल्ला भयो, सबै हेर्नआए । डाक्टर ल्याएर देखाए र दबाइ दियो । म केही दिन ठाडो बस्न नस्कने भएँ । उठेर दिसा गर्ननै नसक्ने भएँ । सुतीसुती नै कोपरामा दिसा बस्नपर्ने भयो र त्यो दिसा च्यामेले लैजान्थ्यो ।
यो कुरा जेलका चौकिदार र मूल नाइकेहरूलाई मसला भएछ । रूपचन्द्र्रजी उनीहरूलाई गन्दै नगन्ने “तँ” भनेर सम्बोधन गर्ने, अलि बलियो पनि । त्यसैले उनीहरूले उहाँको रिस गर्थे । चौकीदारहरू आएर मलाई रूपचन्द्र्रको नाउँमा रिपोर्ट गर्न भनेर कर लगाउनथाले । रिपोर्ट गरेपछि, रूपचन्द्र्रलाई मर्मत पनि गर्ने र रिसइवि पनि साध्ने मनसाय रहेछ । मैले रूपचन्द्र्रले गाली गरेकै छैन, तिमीहरू कै नाइकेले कोठामा पहलमानी खेलेर घचेटिदिएकोले यस्तो भएको म रिपोर्ट दिन्न भनेपछि नाजबाफ भएर फर्के । रूपचन्द्रजीले अनि ठूलो सास फेर्नुभयो र मलाई झन् राम्रो दृष्टिकोणले हेर्न थाल्नुभयो । केही दिनपछि उहाँ सेन्ट्रल जेलपट्टि सरुवा हुनुभयो ।
त्यसबेला पञ्चायती कालमा सार्वजनिक सुरक्षाको बन्दीलाई ९÷९ महिनामा पुर्जी थप्थ्यो । ९ महिना बितिसकेर पनि हामीलाई पुर्जी थपिएन र गैरकानुनी थुनुवामा बस्नुपरेकोले साथीहरूले सर्वोच्चमा रिट हालेछन् । बहस हुँदाहुदै छोडनुपर्ने अवस्था आएकाले त्यो दिन न्यायाधीशले बहस स्थगित गरेछन् । भोलिपल्ट हामी २ गोविन्द दाइ र मलाई अञ्चलाधीश अफिसमा लगियो र हामीले छुट्टी पायौँ भन्ने कागजमा सही गराइयो । त्यसबेला अञ्चलाधीश कार्यालय रानी पोखरीनिर अहिले मध्यमाञ्चल प्रहरी कार्यालय बसेको घरमा थियो । हामी त्यहाँ हिँडेर १०० कदम जतिमात्र के हिँडेका थियौँ, प्रहरीले फेरि समातेर डिल्लीबजार खोरतिर लगे । भोलिपल्ट फेरि ९ महिनाको पुर्जी थपेर उही भद्रगोल जेलमा लगे । पहिले हामीलाई वीरगन्ज जेलमा २ नं. को सिदा दिएका थिए । सङ्घर्ष गरौँ, अनसन बसौँ भन्दा गोविन्द दाइ एकछाक भोक खप्न नसक्ने भनेर त्यही सिदामा चित्त बुझाएका थियौँ । काठमाडौँ आएपछि जेलरसँग झगडा भइरहन्थ्यो । त्यो पुर्जी दिएपछि जेलरले ‘‘लौ अब तपाईंहरू र मेरो झगडा सिद्धियो तपाईंहरूले पनि १ नं.को सिदा पाउनु भयो’’ भने । बल्ल हामीले राजबन्दीको सिदा पायौँ ।
१ नं.को सिदा पाएपछि हामी पनि मनमोहनजी कै भान्छामा समावेश भयौँ । पहिले त २ नं.को सिदामा उसिनाको चामल आउँथ्यो । त्यसै भएर नमिसाएको हो कि जस्तो लाग्यो । हामी जेल परेपछि मकवानपुरको हटिया प्रहरीसँग मिली विरोधीले दमन तीव्र पारेछन् । त्यसै सिलसिलामा गिरफ्तार भएर बद्रीप्रसाद खतिवडा पनि भद्रगोल जेलमै आइपुगे । हप्ताहप्तामा १ पटक मनमोहनजीले राँगाको मासु खुवाउनुहुन्थ्यो । हाम्रो त अरू आय स्रोत थिएन । कमलजीको घरबाट महिनाको १०० रुपियाँ आउँथ्यो । मनमोहनजीको भान्सामा मिलेपछि खानपिन राम्रै भयो । बिहान चियानास्ता खतिवडाबाहेक सगोलमै खान्थ्यौँ । पहिले हाम्रो चियानास्ता हुँदैनथ्यो । खतिवडा चियामा सामिल हुनुहुन्नथ्यो, किनभने भिन्दै आफ्नो कोठामा एक कचौरी खिर बनाएर खाँदै हामी चिया खाइरहेको बेला आउनुहुन्थ्यो । उहाँको यो बानी साथीहरूलाई मनपरेको थिएन । एक दिन सबैजना लस्करै बसेर भान्छा गरिरहेको बेलामा भान्छेले खतिवडाजीलाई एउटा भाँडो ल्याएर दियो । त्यो खसीको खुट्टा गालेर सुप बनाएको रहेछ । उहाँले थपक्क २ टुक्रा झिकेर मलाई मात्र थालमा हालिदिनुभयो र आपूmले पकापक खान थाल्नुभयो । मनमोहनजी, शम्भुरामजी, महेश्वरजी, कमल कोइरालाले मुखामुख गरे । मलाई पो के गरुँ के गरुँ भयो, जीउनै भारी भयो, अकमक्क परेँ, खानु कि नखानु, त्यसरी छुटयाएर खाने प्रवृत्ति नै मलाई थाहा थिएन । शम्भुरामजीले खानुस्खानुस् भनेपछि गह्रुँगो चालले खाएँ, मलाई साह्रै नराम्रो लाग्यो । खतिवडाजीलाई त के लाग्यो थाहा भएन । खतिवडाजीको छुट्टै कोठा, त्यही ३ नम्बरको बीचको तलामा, हामी सबैको तेस्रो तलामा । जसले जे ल्याए पनि माथि सबै बाँडेर खान्थ्यौँ । खतिवडाजीको तल्लो कोठा, उहाँलाई आएको, त्यो माथि आउँदैन थियो । मकवानपुरे साथीहरूले बेलाबेलामा खतिवडाजीमार्फत केही नगद पठाउँदारहेछन् । त्यसलाई उहाँले आफैँलाई मात्र दिएको सम्झनु हुँदोरहेछ । त्यसबाट हामीले सुको पनि पाएनौँ ।
मनमोहन, शम्भुरामजीजस्ताहरू बसेको ठाउँमा हामी केही जान्न चाहन्थ्यौँ, तर कुनै राजनीतिक प्रशिक्षण भएन । यो एउटा दुःखलाग्दो कुरा थियो । म पुष्पलालजीसँग सम्बन्धित भएर पुष्पलालजीको कुरा उठाँउथँे, त्यसैले त बिगा¥यो भन्ने नकारात्मक जबाफ आउँथ्यो । त्यसैबेला चीन र रूसको खुला विवाद बाहिर आइसकेको थियो । पहिला त चीनदेखि मनमोहनजी खुब रिसाउनुभयो अरे, शम्भुरामजीले सम्झाएपछि मात्र शान्त हुनुभएको भन्ने जेलमै सुनेँ । मनमोहनजीहरू छुट्ने कुरामा सरकारसँग निकै डाइलग चलिरहेको थियो—टङ्कप्रसाद आचार्यमार्फत । बाहिर भरतमोहनजीहरू पनि कागज गरेर छुट्नुहुन्न भन्ने पक्षमा थिए अरे भन्ने सुनेका थियौँ । कमल, महेश्वरहरू पनि यसै भन्थे । तर, एकदिन शम्भुरामजीले ड्राफ्ट गरेको कागज मेरो अक्षर राम्रो छ भनेर साफी गर्न दिनुभयो । त्यो कागजले उहाँहरूको छविलाई राम्रो पार्दैनथ्यो । त्यो कागज बाहिर पठाइयो र केही दिनपछि उहाँहरू छुट्नुभयो । हामी उस्तैउस्ता मात्र भयौँ । धक मान्नुपर्ने मान्छे नभएपछि रमाइलै भयो । कमलजी असाध्यै मिलनसार, गफाडी, टुक्का, चुटका खुब जान्ने । दिन गएको पत्तै हुँदैनथ्यो ।
जेलको दोस्रो अध्याय
जेलमा हामी त स्थायीजस्तै भएका थियौँ । एक हुल आँउथे, फेरि हुरुरु जान्थे, धेरैजसो विद्यार्थीहरू आउँथे । किनभने त्यसबेला पार्टीहरू प्रतिबन्धित भएका हुनाले राजनीतिमा विद्यार्थीहरूकै भूमिका थियो । पछि महेन्द्र श्रेष्ठ पनि छुट्नुभयो । अनि सेन्ट्रल जेलबाट निर्मल लामा र सिन्धुनाथ प्याकुरेल आउनुभयो । पछि मोहनविक्रम सिंह, बाबुकाजी बासुकला, बुद्धिकुमार गोसाईंहरू पनि भद्रगोल जेलमै आउनुभयो । उता सेन्ट्रल जेलमा मकवानपुरका वासुदेव रिजाल, चक्रपाणि रिजालहरू थिए । चक्रपाणि त चाँडै छुटे । साथीहरूमा वासुदेव मात्र उता परे सेन्ट्रलतिर । हामी सबैको भान्छा एउटै भयो ।
भद्रगोल जेलमा जम्मा दुइटा घर २ फ्लोरको र एउटा घर ३ फ्लोरको थियो । एउटा घर भद्रशम्सेरलाई राख्न भनेर बनाइएको २ तले थियो । त्यहाँ बन्दीहरू बस्तैनथे र पागलहरूलाई राखिन्थ्यो । एकपटक जर्मनीको एउटा पागललाई थुन्न ल्याइएको थियो । पागलहरू जम्मा २०/२२ जनासम्म थिए । पागल विभिन्न प्रकारका, खुला नै छोडिएको थियो । त्यो जर्मन पागल कमलजीसँग खुब मिल्थ्यो र हाम्रो कोठामा आइरहन्थ्यो । किनकिन निर्मल लामालाई चाहिँ देखिसहँदैनथ्यो । एकदिन त्यो लामघारे जर्मन पागलले हाम्रो कोठामा ढोकाबाट चियाएर हे¥यो । निर्मलजीलाई देखेपछि बोतलको सिसी उठाएर ताक्यो, निर्मलले लौरो उज्याउनुभयो, पागलले बोतलले हिर्काइहाल्यो । तै लामाजीले त्यो बोतललाई छेक्नुभयो र बोतल झ¥यामझुरुम फुट्यो । एवं रितले दुइटा बोतलले हिर्कायो, त्यसैगरी लामाजीले लौरीले रोक्नुभयो । कोठामा हल्लाखल्ला भयो र पागललाई लखेट्न थाल्यौँ । नाङ्गो पैतला हुँदा बोतलको टुक्राले लामाजीको खुट्टाको औलाको फेदमा नराम्ररी काट्यो । एकदम कोठैभरि रगताम्य भयो । पागललाई जेलभित्र जथाभावी छोडेर, जेललाई पागलखाना जस्तो बनाएको विरोधमा नाराबाजी ग¥यौँ र गोविन्द दाइबाहेक हामी सबैले त्यसको विरोधमा भोकहडताल ग¥यौँ । त्यसको भोलिपल्ट पागल जतिलाई पर्खालले घेरेर बाहिर निस्कन नपाउने सर्तमा भोक हड्ताल तोड्यौँ ।
खतिवडामाथि रिस पोखे
कमल कोइरालालाई भेट्न एउटी केटी दिव्येश्वरी हफ्तामा एक पटक आइरहने । तर, कमलजीलाई त्यो केटी मन नपरेको कुरा गर्नुहुन्थ्यो । उहाँका मातापितालाई मन परेकी केटी । कमलजी भूमिगत भएर भारतको फारबिसगन्ज बसेको बेलामा त्यही केटी कमललाई देखाउन लगिएको रहेछ । भेटघाटमा नजिकै फारबिसगन्ज नगरपालिकाको चुनाउ भैरहेको देखेर, “के तपाईं यस्तै चुनाउमा लाग्नुभएको हो ?” भनेर ती केटीले सोधेकाले सामान्य पनि राजनीति नबुभ्mने भनेर तिनलाई मन नपराउनु भएको कुरा गर्नुहुन्थ्यो । त्योसँग कुनै हालतमा बिहे गर्दिन भन्ने उहाँको अठोट पनि थियो ।
खतिवडाजी बिहानै जहिले पनि आफ्नो कोठाबाट उठेर कमलजी सुतिरहेको ठाँउमा घच्घच्याउँदै— “ए ! दिव्येश्वरीको पोइ” भनेर जिस्क्याइरहनु हुन्थ्यो । एकदिन बिहान म दिसा बस्ने भनेर बाहिर गएको थिएँ, आँउदा त कोठामा सबै छन् तर कोही नबोली झोक्राएर बसेका र कमलजी मुख छोपेर सुतिरहेको पाएँ । के भएको हो भनेर सोध्दा कोही पनि बोल्दैनन् । बद्रीप्रसाद खतिवडाजी पनि झोक्राएर बसेका । महेश्वरमान श्रेष्ठजीले पो बल्ल मुख खोल्नुभयो । खतिवडाजीले कमललाई सधैँझँै दिव्येश्वरीको पोइ भनेर बारम्बार घच्घच्याँउदा कमलजीले निन्द्रैमा हो वा के हो जुरुक्क उठेर भटाभट गालामा ठोक्नुभयो, खतिवडाजीको चस्मा झ¥यामझुरुम भयो । फेरि उहाँ सुतिरहनु भएको छ, भन्नुभयो । पछि कमलजी थाहा नपाएजस्तो के भो’, के भो’, भनेर उठ्नुभयो । तपाईंले के पो गर्नुभएन, खतिवडाजीलाई कुट्नुभयो, चस्मा फुटाली दिनुभयो भनेर भन्दा उहाँले थाहै नपाएको र निद्रामै गरेँ हुँला भन्नुभयो ।
एकदिन एकान्तमा सोद्धा कमलजीले भन्नुभयो, त्यो मैले जानीजानी गरेको हुँ । एकदिन होइन, दुईदिन होइन, सँधै भेट भयो कि दिव्येश्वरीको पोइ भनेर हैरान पार्ने, खालि फोहोरी शब्दबाट ठट्टा गर्ने, सामूहिक भाषा नभएको आदिले रिस उठिरहेको थियो र निद्राको बहाना पारेर बजाइदिएँ भन्नुभयो ।
मेरो र कमलजीको त्यही केटी दिव्येश्वरीको बारेमा एउटा घटना छ । उहाँ दिव्येश्वरीसँग बिहे नै नगर्ने प्रतिज्ञामा, म त्यही केटीसँग तपाईंले बिहा गर्नुहुन्छ भन्ने प्रतिज्ञामा । लौ त बाजी भयो भनेर हाम्रो बाजी परेको थियो । उहाँ जेलबाट निस्केपछि एक महिनापछि मलाई जेलबाहिर मानिस भेट्न आएको खबर आयो । बाहिर निस्कँदा त उही कमलजी, भलाकुसारी भयो । तपाईं र मेरो बाजी थियो नि त्यो बाजी तपाईंले जित्नुभयो भन्नुभयो । कुन बाजी भन्दा दिव्येश्वरीसँग बिहे गर्ने र नगर्ने बाजी भन्नुभयो । मैले त्यही दिव्येश्वरीसँग नै बिहा गरेँ, गुह्येश्वरीमा गएर । उहाँको विवाह ३१ वर्षको उमेरमा, ब्रतबन्ध पनि त्यही बेला गरिएछ । तपाईंले कसरी भन्न सक्नुभयो त्यही केटीसँग बिहा हुन्छ भनेर, सोध्नुभयो ।
मैले भनें , 'तपाईंको मनोविज्ञानको हिसाब लगाएर । तपाईं ३१ बर्ष पुगिसक्नुभयो । जेलभित्र कुनै केटी ढोकामा आएकी छ भन्ने सुन्नासाथ दौडेर ढोकामा हेर्न आउने । जेलको झ्यालबाट पर डाक्टरको क्वार्टरमा उसकी छोरी आउनासाथ त्यो झ्याल नछोडने र त्यस्तै यौन गफ गर्ने आदि क्रियाकलाप हेर्दा तपाईंलाई विवाह गर्न आतुर भइसकेको मैले बुझेँ । जेलभित्र त सधैँ भेटन आउने । त्यो भेट्न आउने कुरा कमलका मातापिता र केटीको मातापिताको सल्लाह बमोजिम भएको रहेछ । तपाईं जेलबाट निस्कनासाथ भेट्ने प्रक्रिया चलिहाल्छ र तपाईंको मातापिताको त्यो केटीसँग विवाह गर्ने दबाब बढ्छ । अनि तपाईंको भित्री मनको विवाह गर्ने आतुरताले अरू खोजिरहने झन्झट गरिरहनुभन्दा त भनेर झट्टै पाइहाल्ने केटी किन छाड्ने भन्ने मनमा लागिहाल्छ भन्ने मनसायले भनेको हुँ भनेँ '।
कमलजीको अर्को एउटा घटना छ । भू.पू. प्रधानमन्त्रीको छोरा भनेर जेलभरि सबैले जानेका । त्यसैले सबैले सम्मानको दृष्टिकोणले हेर्ने । बडादसैँको चाड ! सोमरस फ्री ! सबैले खान निम्ता गर्ने । निम्ता नमान्नु भएन । अलि अलि सबैकहाँ मान्दामान्दै उहाँ त झुम । रात १२ बजेसम्म यही क्रम चार पाँच दिन दसैँभरि यो क्रम चल्दा उहाँको दिमाग त चट् । रातभररातभर ठयाम्मै निन्द्रा नपर्ने । मर्फी इन्जेक्सनले पनि राम्रोसँग छोएन । त्यसैले जुरुक्क उठ्ने, लौ भातगात भरा भनेर कराउने । जेलको ढवाँगे रेडियो बज्यो कि बुर्लुक्कै उफ्रने । लुज पेन्ट लगाउनु भएको छ । दुवै हातले पेन्ट स्याहारेर लफ्य्राक लफ्य्राक हिँड्ने । खालि उहाँको दिमागमा जेल र पुलिसको धम्की आएजस्तो लागिरहने । निन्द्रा ठयाम्मै नलागेपछि र इन्जेक्शनले पनि नभेटेपछि आपत परेन ? मन एकोहोरो पारे निन्द्रा लाग्छ भनेर मलाई निर्मलजीले सुत्ने बेलामा उपन्यासको कथा पढेर सुनाउन भन्नुभयो । त्यसै गरेँ । तर उपन्यास सुने पो । लौ दिमाग त चट् भयो । एउटा राम्रो साथी, रमाइलो साथी, विचार मिल्ने साथी यस्तो भएकोमा सबैले चित्त दुखाउनु स्वाभाविकै थियो । ५÷६ दिनपछि बिस्तारबिस्तार निद्रा पर्न थाल्यो र क्रमशः सुधार हुँदै गएपछि सबै खुसी भए ।
जेल बसाइको नया“ ढङ्ग
अब हाम्रो मेसमा मोहनविक्रम, निर्मल लामा, म, बाबुकाजी बासुकला, कमल कोइराला, बुद्धिकुमार गोसाँईं, मनाङ्को पेमा लामा, सिन्धुनाथ प्याकुरेल र गोविन्द दाइ भयौँ । निर्मल लामाजीले चौकीदारसँग भनेर एउटा लामो सुर्को बारीको पाटो जेलभित्रै तरकारीको लागि लियौँ । सबैले खनेर थरीथरीका तरकारीहरू लगायौँ । बुद्धिकुमार गोसाँईं तरकारी खेती गर्न सिपालु । च्यामेद्वारा पाइखानाको फोहोर बारीभरि हालेर त्यसलाई माटोले छोपी तरकारी लगाएको, तरकारी त्यसै रहरलाग्दो भएर आयो । त्यसले पनि हामीलाई निकै भरथेग भयो ।
महिनामहिना दिनका लागि हाम्रो टिमभरिको नेता फेरिन्थ्यो । उसको काम सबैले निर्णय भएबमोजिम काम गरेको छ कि छैन भनेर हेर्ने थियो । महिना, महिना दिनमा कामको हेरफेर भइहाल्थ्यो । पानी बोक्ने, कोठा सफा गर्ने, भान्छाको किनमेल गर्ने एक एकजनाको जिम्मा हुन्थ्यो । बिहान उठेपछि आफ्नो बिछ्याउना आफैँले अनिवार्य पट्याउनु पर्ने । एक टाइम अध्ययन अनिवार्य थियो । बेलुकी भएपछि दिनभरिको कामको मूल्याङ्कन र आलोचना–आत्मालोचना हुन्थ्यो । हप्तामा एकपटक शुक्रवार सबैले केही न केही लेखेर बेलुकी सुनाउनुपथ्र्यो । शनिवार बेलुकी एउटा साथीलाई यो किताब पढनु भनेर जिम्मा दिइएको हुन्थ्यो । उसले त्यसको बारेमा व्याख्या गर्नुपथ्र्यो । हप्तामा एकपटक बिहान जेल सफा गर्ने कामहरू गथ्र्यौं । यो देखेर जेलमा राम्रो प्रभाव परेको थियो । अझ कमल कोइरालाले माथि धाराबाट गाग्रीमा पानी ल्याएको देखेर कम्युनिस्टहरूमा ठूलोसानो भन्ने हुँदैन, सबैले श्रम गर्छन्, प्रधानमन्त्रीको छोरोलाई पनि पानी बोकाए÷बोक्यो भनेर चर्चा हुन्थ्यो ।
महिनामहिना दिनमा मेस इन्चार्ज फेरिन्थ्यो । मेस इन्चार्जले आफ्नो आम्दानीखर्चको बजेट पेस गर्नुपथ्र्यो र चार्ज बुझाउँदा हरहिसाब बुझाउनुपथ्र्यो । मोहनविक्रम जीलाई भने कामको जिम्मा दिइएको थिएन । किनभने उहाँको बि.ए.को जाँच थियो र अध्ययनका लागि बिदा दिइएको थियो । शनिवारको दिन उहाँको काम भनेको सबैको जुत्तामा पालिस लगाउने थियो । त्यसबेला काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता, नेताहरू निकै जेल परेका थिए ।
मोहनजीले जेलभित्रै कम्युनिस्ट पार्टीको सेल गठन गर्नुभएको रहेछ । त्यो हामीलाई थाहा थिएन । कमल कोइराला जेलबाट छुटेपछि मात्र थाहा भयो । किनभने त्यो स्थानमा मलाई राखेपछि थाहा भयो । मोहन विक्रम, निर्मल लामा र कमल कोइराला रहेछन् । कमलजी गएपछि उहाँको स्थानमा म भएँ । त्यहाँ पार्टी राजनीतिको छलफल हुन्थ्यो भन्ने थाहा नपाउने गरी हाम्रो ग्रुपलाई पनि लिड गरिरहेको हुन्थ्यो । त्यहाँबाट हामीले हाम्रा विचारहरू बाहिर पठाउने गथ्र्यौं । बाहिर पार्टी त्यसबेला लथालिङ्ग थियो । पुष्पलालजीले केन्द्रीय एडहक कमिटी गठन गरेर पार्टी सम्पर्क बढाउने कोसिस गर्नुभएको थियो । त्यो कमिटीमा म पनि थिएँ । तर, त्यसले पार्टी घोषणा गर्ने भनेको थिएन र संशोधनवादीहरूलाई छाडेर विचार मिल्ने साथीहरूसँग सम्पर्क गरेर पार्टी निर्माण गर्न छलफल चलाउने भनेको थियो । तर, २०२५ सालमा गोरखपुरमा सम्मेलन गरेर पार्टी घोषणा गरेको र म पनि केन्द्रीय समितिमा भएको खबर घिउको डिब्बामा आएको पुष्पलालको पत्रबाट थाहा भयो । त्यसमा मलाई नबस्न मोहनजी र निर्मलजीले जोड गर्नुभयो, किनभने यसबाट व्यापक पार्टी एकता हुँदैन भन्ने थियो । पत्रमा नारायणी अञ्चलमा को को राखेर काम गर्ने भन्ने सल्लाह मागिएको थियो, त्यसको जबाफ मैले पठाइँन ।
जेलको कमिटीले रूसी संशोधनवादको विरोध र माओ विचारधारा मान्ने, काङ्ग्रेस र राजालाई समान दुस्मन मान्नुपर्ने विचारहरू पठाएका थियौँ ।
('भक्तबहादुर श्रेष्ठ स्मृतिग्रन्थ'बाट)